18W « MMWeather Information BLOG
Leaveacomment Uncategorized စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း JELAWAT အိုကီနာဝါကျွန်းသို့ ဦးတည်
Leaveacomment Uncategorized အားကောင်းသော အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာသည့် JELAWAT
One comment Uncategorized မုန်တိုင်း JELAWAT ၇၂ နာရီအတွင်း အဆင့်-၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာဘွယ်ရှိ
By mmweather.ygn, on September 22nd, 2012%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း JELAWAT သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြို့တော် မနီလာ၏ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် ၆၂၅ ခန့်ကွာဝေးသည့် ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုပြီး ဖြည်းညှင်းစွာ လက်ဝဲရစ်လည်ပတ်ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
နောက်ဆုံးရရှိသည့် လမ်းကြောင်းခန့်မှန်းချက်များအရ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနှင့်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကြားရှိ ဘာလင်တန်ရေလက်ကြား(Balintang Chanel)အား စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၈၃၀ နာရီ(1200UTC) တွင် ကျော်ဖြတ်ကာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မုန်တိုင်း JELAWAT သည် ဘာလင်တန် ရေလက်ကြားအား မဖြတ်သန်းမီ လာမည့် ၇၂ နာရီအတွင်း(စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၈၃၀ နာရီ မတိုင်မီ) အားအလွန်ကောင်းသော အဆင့်-၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်လာနိုင်ကြောင်း TSR . . . → Read More: မုန်တိုင်း JELAWAT ၇၂ နာရီအတွင်း အဆင့်-၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာဘွယ်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized အဆင့်-၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာဦးမည့် JELAWAT
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း JELAWAT(18W) ဖိလစ်ပိုင်အမည် LAWIN သည်၊ မနီလာမြို့တော် အရှေ့တောင်ဘက် ၆၄၅ မိုင်ခန့်အကွာ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး လက်ဝဲရစ်ရွေ့လျားကာ လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း(စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ မှစတင်၍ အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့လည်းကောင်း၊ လာမည့် ၄၈ နာရီအတွင်း အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ လည်းကောင်း၊ လာမည့် ၇၂ နာရီအတွင်း အဆင့်-၃ နှင့် လာမည့် ၉၆ နာရီအတွင်း အဆင့်-၄ အားအလွန်ကောင်းသည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာမည်ဟု TSR မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။
မုန်တိုင်း အရွယ်အစား အချင်းမိုင် ၄၄၅ ကီလိုမီတာ(၂၈၀ မိုင်ခန့်) ရှိနေပြီး မုန်တိုင်း . . . → Read More: အဆင့်-၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး ဖြစ်လာဦးမည့် JELAWAT
Leaveacomment Uncategorized ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်(ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်း)တွင် ၁၈ လုံးမြောက် မုန်တိုင်း JELAWAT ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
3 comments Uncategorized ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ active system များ
By mmweather.ygn, on September 12th, 2011%
လေဖိအားနည်းဆဲလ် 93W, 94W နှင့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 18W(EIGHTEEN) တို့သည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်နှင့် ဗီယက်နန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပါသည် –
စက်တင်ဘာလ ၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၂၄း၃ဝ နာရီက စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 18W သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 18W(EIGHTEEN) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာကာ ထိုင်ဝမ်ကျွန်း – တိုင်ပေမြို့တော်၏ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၉၃ဝ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၃ မိုင်နှုန်းဖြင့်ရွေ့လျားခဲ့ပါသည်။ NRL data အရ အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၁ မိုင်ကျော်ကျော်နှုန်းခန့်ဖြင့် အလွန်ဖြည်းညင်းစွာ ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ဗီယက်နန်ကမ်းခြေတွင် စက်တင်ဘာလ . . . → Read More: ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ active system များ
4 comments Uncategorized Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum